के होला ओली–प्रचण्ड दुबैको रातो टेबुल र बैठकस्थलको दृश्यको अर्थ ? « Dainik Online
के होला ओली–प्रचण्ड दुबैको रातो टेबुल र बैठकस्थलको दृश्यको अर्थ ?
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७७, शनिबार १ : ३५
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । यसअघिका सचिवालय बैठक र यसपालिको बैठकस्थलको बसाई र त्यहाँको दृश्य भने एकदमै फरक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार suryaले सचिवालय बैठकको तस्वीर पोष्ट गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘नेकपा सचिवालय बैठक– नयाँ बसाइको व्यवस्थापन साथ ।’ प्रेस सल्लाहकार थापाले पोष्ट गरेको उक्त फोटोमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुर्सी सँगसँगै राखिएको छ । साथमा, दुबै अध्यक्षको कुर्सी अगाडिका टेबुल रातो रहेका छन् । अन्य सचिवालय सदस्यहरुको टेबुल भने सेतो रङका देखिन्छन् । के होला दुबै अध्यक्षको टेबुलको रातो रङको अर्थ ?
केहीबेरअघि शुरू भएको सचिवालयको बैठकमा पछिल्लो समय नेकपाभित्र चुलिएको विवाद समाधानको प्रयास हुनेछ । नेकपाभित्र विवाद यति बढेको छ कि दुबैपक्ष आआफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेको अवस्थामा पार्टी नै विभाजित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थामा पछिल्लो समय नेताहरुबीच गम्भीर छलफल जारी छ । समूह समूहबीचको अलगअलग छलफलपछि सचिवालय बैठक शुरू भएको हो ।
अघिल्ला बैठकहरुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लागि विशेष कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । आजको बैठकमा भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि पनि ओलीसँगै कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको छ । दुई अध्यक्षको टेबुल सँगै रहनु र दुबैका टेबुलका रङ रातो हुनुले ‘समान हैसियत’ देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेको र अति महत्वपूर्ण तथा सम्वेदनशील निर्णयहरु पनि आफूखुशी गर्दै आएको भन्दै उहाँको पार्टीभित्रै कडा आलोचना हुँदै आएको छ । आलोचनामात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनेसम्मको अभियान चलेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि वामदेव कार्ड फाल्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ । उता माधव नेपाल समूहका लागि नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको प्रस्तावसम्म अगाडि सार्नुभएको छ ।
आजको सचिवालय बैठकको दृश्यले ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भनिए पनि सरकार सञ्चालनको मामिलामा भूमिकाविहीन जस्तै बनाइनु भएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समान हैसियत दिएको सन्देश दिइएको छ । बैठकस्थलमा देखिएको यो दृश्यले सकारात्मक सन्देश त दिएको छ तर के पार्टी र सरकार सञ्चालनका सबै विषयहरुमा यस्तो अवस्था देखिएला ? यता गर्यो, उता गर्यो । यताको कुर्सी उता मिलायो । उताको टेबुल यता मिलायो । के यसैगरी नेकपा र सरकारका आगामी दिन धकेलिएलान् ?